Kheladi - पुस्तक अंशः अबको दशक साहसिक खेलकुदको
सानै उमेरदेखि सामाजिक अभियानमा संलग्न गोविन्द भट्टराई विभिन्न विषयहरूमा कलम चलाउँछन्, बहस गर्छन् र आफ्ना धारणा राख्छन् । सडक सुरक्षा अभियन्ता, खेल अधिकारी, पर्यटन प्रवर्द्धक र स्तम्भ लेखकको समेत पहिचान बनाएका उनी साहित्य, समाजसेवा र राजनीतिमा समेत रूची राख्छन् ।
आफलाई सामाजिक उद्यमी भन्न रूचाउने भट्टराईको ‘जिजीविषा’ कविता संग्रह र ‘ब्याकगियर’ व्यंग्य संग्रह यसअघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् । सडक सुरक्षा अभियानका विभिन्न संघ संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका उनी हाल विश्वकै अग्रणी मोटरिङ संगठन फेडरेसन इन्टरनेसनल डे अटोमोबाइलका वर्ल्ड काउन्सिल मेम्बर समेत हुन् भने नासा फाउन्डेसन नेपाल र नासा नेपालका संस्थापक मध्येका एक ।
मोटर स्पोट्स तथा एड्भेन्चर स्पोट्समा समेत दख्खल राख्ने भट्टराई नेसनल एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी–नेपालका संस्थापक पनि हुन् । सडक सुरक्षा र साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको एजेन्डालाई स्थापित गर्नमा पाएको सफलता नै आफ्नो जीवनको सार्थकता ठान्ने उनी कुनै समयका सक्रिय ट्रेड युनियनकर्मी, सहकारीकर्मी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य समेत हुन् ।
उनै भट्टराईले ‘कार्ल मार्क्सको कसम’ नामको पुस्तन प्रकाशनमा ल्याएका छन् । पुस्तकमा न्युट्रल पोजिशन, गियर एकदेखि पाँच र ब्याक गियर गरी सात भागमा पुस्तकको विविधि विषयवस्तुलाई समेटिएको छ । जसको पाँचौ गियरमा खेल– पर्यटन विषय समेटिएको छ । सोही किताबमा नेपालमा साहसिक खेलकुदको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे लेखिएको पुस्तक अंश यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
नेपालमा साङ्गठनिक रूपमा खेलकुदको आरम्भ भएको लगभग एक शताब्दी भइसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्कै स्थापना भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । हामीले हिजो जेजसलाई खेल मान्यौं, आज विस्तारै धारणा मात्र हैन यथार्थतामा समेत परिवर्तन आइसकेको छ ।
संसारमा खेलकुद स्वस्थ रहनमात्र होइन रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि कुटनैतिक आयामसमेत बनेको छ । तिनै सन्दर्भमा, नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) को एक दशक पुगेको शुभकामनासहित यो आलेख थालिएको छ ।
ख्याल–ख्याल नै सही केही नयाँ अभियान, केही नयाँपन । नेपाली युवामाझ खेलकुद र पर्यटनमा केही नौलोपन दिन सफल भएको मान्नुपर्छ । साहसिक खेलकुद र पर्यटनमा मोटर स्पोट्स एउटा मुख्य विकल्प बन्न सकेको छ ।
नासा नेपालले यो वर्ष आफ्नो स्थापनाको एक दशक मनाइरहेको छ । खेलकुदबाट प्रवेश गरेको यो संघ आज कार्यक्रमका हिसाबले महासंघजस्तै बनेको छ । नेपालमा केही उत्साहितहरूले मोटरस्पोट्स सुरु गरेको ख्याल–ख्याल जस्तै लाग्छ । एक दशक पछाडि फर्केर हेर्दा केही हाँसो लाग्छ । केही रमाइलो अनि अनौठो । नेपालमा ‘मोटरको खल हुन्छ र ?’ भन्ने अवस्था थियो । अझ यसो भनौं आजसम्म खेलकुद सचिव, मन्त्री, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारी निकायहरूले मोटरस्पोट्सलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् । दस वर्षअघि त्यो हिम्मत गर्नु भनेको सानो दुस्साहस नै हो ।
यो एक दशकमा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले जति प्रगति गर्यो । सम्झनलायक गर्यो किन नभन्ने ?
हामीले गाडीलाई भारी बोक्ने मात्र भनेर बुझ्यौँ र धोका पायौँ । आज फेरि विलासिता वस्तुको रूपमा मात्र बुझेर धोका खाँदैछौं । देशलाई नै धोका दिँदैछौं ।
गाडी, मोटरसाइकल खेलकुदका साधन भइसके भन्ने यथार्थ थाहा पाउन हाम्रा भाग्य विधातालाई कति वर्ष लाग्दो हो ? त्यतिबेलासम्म तिनीहरूको जागिर त पाक्छ । हामीलाई खाडलमा पुर्याउलान् भन्ने पीर मात्र हो ।
२०५०/०५१ सालतिर हुनुपर्छ होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा ड्याकम्सले एउटा सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेलै युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (टोयोटाको वर्कसप) का तर्फबाट भाग लिन जाँदा भेट भएको थियो । त्यतिबेलाको सोल्टी, हिक्मत माली दाइको रवाफ र व्यक्तित्व, नेपालभरकै बडेबडे साहुजीको जमघट अनि त्यसमा म बबुरो । अहिले सम्झँदा अनौठो लाग्छ ।
स्वर्गीय हिक्मतबहादुर माली सबैको प्रिय थिए । तर, हत्तपत्त कसैले अनुमान गर्न नसक्ने, झट्ट सम्झाइबुझाई गर्छु भन्न नसक्ने थिए । कुन बेला कुन मुडमा छन् भन्ने हेर्नुपथ्र्याे ।
२०५०/०५१ सालतिर हुनुपर्छ होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा ड्याकम्सले एउटा सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेलै युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (टोयोटाको वर्कसप) का तर्फबाट भाग लिन जाँदा भेट भएको थियो । त्यतिबेलाको सोल्टी, हिक्मत माली दाइको रवाफ र व्यक्तित्व, नेपालभरकै बडेबडे साहुजीको जमघट अनि त्यसमा म बबुरो । अहिले सम्झँदा अनौठो लाग्छ । त्यो सेमिनार दुईदिनको थियो । सेमिनारबाट हिक्मत दाइ र कम्पनीले व्यापार पाए पाएनन् या वर्कसपवालाले केही बुझे बुझेनन्, हाम्रा साहुजीले लुब्रिकेन्ट्स व्यापार गरेर दाम कमाए कि कमाएनन् ? त्यो अब नलेखेको इतिहास भइसक्यो ।
एउटा कुरा भने गज्जबले जम्यो । त्यो दिनदेखि मालीदाइ र मेरो सम्बन्ध ।
न उमेर मिल्ने । सम्पत्तिको के तुलना गर्नु ! हाम्रा संयुक्त साथी र आफन्त पनि कोही छैनन् । तर खोइ त्यो सेमिनारमा मेरो जिज्ञासुपन, सक्रियता, धेरै प्राविधिक पक्षलाई रमाइलोसँग प्रस्तुति, सहभागीसँगको व्यवहारले मात्र होला म उहाँको नोटिसमा परेको । कतिसम्म भने टोयोटाका मेरा बडेबडे साहु र हाकिमसँगै मलाई भेट्दा पनि मैबाट सुरु गर्ने उहाँको बानीले कतिपटक भाग्नु परेको थियो । तिनै हिक्मतदाइको उपस्थितिले मात्र हाम्रो यो सफलता हो ।
संसारमै मोटरस्पोट्र्स सङ्गठित भएको सवासय वर्ष हुन लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ बनेको पनि सय वर्षभन्दा पनि बढी भो । नेपालमा मान्छेको काँधमा बोकिएर गाडी आएको सवा सयवर्षपछि त्यहीं गाडीलाई खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु कम्ति रोमाञ्चित अनुभव होइन । हिमाल, पहाड अनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा मोटर स्पोट्र्स र मोटर साइक्लिङ स्पोट्र्सलाई विश्वमा चिनाउनु मात्र नभई, विश्वकै ट्रयाकमा कुदाउन पाउनु पनि सानु कुरा होइन ।
दुर्भाग्य हामीले लामोसमय सङ्गठित सहकार्य गर्न पाएनौँ । अन्य सम्बनध लामै भए । जति गर्यौं त्यसले नेपाली अटोमोबाइल, नेपाली खेलकुद र नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई केही न केही दिन सक्यौँ भन्दा बढी नहोला ।
दर्जनौँ राइडर्स, ड्राइभर्स, अफिसियल, प्राविधिक अनि सङ्गठित टिमको परिणाम हो कुनै खेल इभेन्ट । जुन टिमको अग्रभागमा, सुरुवाती दुःख र चुनौतीपूर्ण समयमा हिक्मत दाइ हुनुहुन्थ्यो ।
साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको जगमै मोटर, मोटर साइक्लिङ स्पोट्र्स जस्ता मुख्य विधा छन् संसारमै । ड्राइभ टुरिजम र टु–ह्विल टुरिङ, साहसिक पर्यटनको मुख्य विकल्प मान्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव, एकता, युवाजागरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगारी र उद्यमशीलजस्ता बहुआयामिक परिचय दिने अटोमोबाइल र मोटर स्पोट्र्समा छौं भन्दा किन खुसी नहुने ?
केपी ओलीजस्ता स्वप्निल प्रधानमन्त्री भएको देशमा पनि अनौठा, गतिहीन, उद्देश्यहिन व्यवस्थापकीय नेतृत्व छ । खेलकुद र पर्यटनमा पनि त्यही हालत छ भन्दा अझै ननिको लाग्छ । मन्त्रालयले मात्र होइन पर्यटन बोर्ड, परिषद् लगायतमा नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन, प्याराग्लाइडिङले ल्याएको पदक होस् वा संसारकै र्याफ्टिङ क्षेत्रमा नेपालीले बनाएको स्थानबारे ।
एकदशक आफैमा लामो अवधि मानिन्छ । तर, प्रतिफल निकाल्नेगरी एउटा अभियान, सङ्गठनको लागि पर्याप्त समय हुँदो रहेनछ । यसको अर्थ पहिलो एक दशकमा केही पनि प्रगति भएन भन्न खोजेको होइन । अर्काे दशकमा चमत्कारिक परिणामको तयारीमा हनुपर्छ भनेको मात्र हो ।
अब खेलकुद स्पोट्र्स मात्र रहेन । अब उद्यम, रोजगारी, पर्यटन पनि भयो । हामी त मोटरिङ, साइक्लिङ, गल्फ, पाराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङजस्ता इभेन्ट बुझ्छौं । जुन नेपालको यथार्थता हो । तर त्यसलाई बुझ्नुपर्नेले नबुझे पछि के लाग्छ ? हामीले बाँदरको टाउकोमा लालीगुराँस त लगाएनौं ? कहिलेकाहीं आउने प्रश्न मात्र होइन मुलकको यथार्थता हो ।
नेपाली राइडर्सहरू थप्रै देशका प्रसिद्ध रेसिङ सर्किटमा आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न सफल भएका छन् । त्यस्तै एसियास्तरीय प्रतियोगितामा नेपाली ड्राइभरका प्रस्तुति गर्व गर्न लायक छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पाएको सफलताबाट किन खुसी नहुनु । एउटा बीमा ऐन मात्र नेपालको साहसिक खेलकुदको पक्षमा भएको भए अझ राम्रो प्रगति गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा भने दुःख लागेको छ ।
समय अनुसार विस्तारै मानिसको रुचि फेरिंदो छ । अब एकै किसिमको न पर्यटन चल्छ न खेलकुद । चल्छ त केवल कर्मचारीको रोजीरोटी । आधारभूत खेलकुद, प्रतिस्पर्धात्मक, पर्यटकीय गरी तीन तहमा काम गर्नसके सकारात्मक परिणाम आउँछ । एउटा संघल गरेर मात्र पाउने परिणाम एक दशकमा हामीले पाइसकेका छौं ।
नेपाललाई साहसिक खेलकुद र पर्यटनको केन्द्र बनाउदै युवाहरूलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान सके जीवनको सुनौलो समय खर्च गरेकोमा कुनै पछुतो हुनेछैन । साहसिक पर्यटनको लागि चाहिने अधिकांश इभेन्ट हामीसँग थुप्रै चिज छन् । केही नीतिगत, कार्यक्रमिक, साङ्गठनिक र ब्रान्डिङ मात्र थप गरे पुग्छ ।
टुरिङ क्षेत्रमा एक दशकमा आमुल परिवर्तन आएको छ । सरकारी निकायले मानोस् नमानोस् । दुनियाले जानेको नेपाल ड्राइभ टुरिजम र टु–ह्विल टुरिङको लागि विश्वमै प्रख्यात देश हो । त्यसै आधारमा क्लबहरु, जिल्ला र स्थानीय संघसँग थुप्रै टुरिङसम्बन्धी कार्यक्रम भएका छन् । जुम्ला, रारा होस् या मुस्ताङको लोमान्थाङ । जिरी होस् या सोलु । पाथिभरादेखि लुम्बिनीसम्म हाम्रा इभेन्टहरू छन् । अब बिस्तारै कर्पाेरेट क्षेत्रको प्रवेश जरुरी छ ।
भारत लगातार दोस्रो पटक एएफसी एसियन कपमा छनोट
हामी छनोट भएर फर्किन्छौंः कप्तान रुबिना